Jami: ihe ikpo okwu ohuru maka ikwuputa okwu efu na nke uwa | Site na Linux
Jami: Uzo ikpo okwu ohuru maka ikwuputa okwu efu na nke uwa
Jami: usoro ikpo okwu ohuru maka nkwukọrịta na ebe niile
Jami bụ aha ọhụrụ nke ngwa ochie akpọrọ Ring. Nke n'ime ohere abụọ gara aga anyị kwurula banyere ya. Oge izizi na edemede 2 akpọrọ «Oku: Ngbanwe nke Skype na GNU / Linux»Ma n’ime ozigbo site na 2018 akpọrọ«Ngwa dị mkpa ma dị mkpa maka GNU / Linux 2018/2019".
Malite na afọ a, 2019, ọrụ ngwa mgbanaka ghọrọ Jami. Iji bụrụ onye nwekwuo ọrụ zuru ụwa ọnụ na ndị ọzọ, mepere emepe maka ndị ọrụ na ndị mmepe nke Free Software na Open Source, yana azụmaahịa na ngalaba.
Ndị mmepe ya ugbu a na-akọwa Jami dị ka:
"Jami bụ nkwukọrịta nkwukọrịta zuru ụwa ọnụ na-echebe nzuzo na nnwere onwe nke ndị ọrụ ya."
Na nke ya Ọhụrụ web portal ha na-ekwu n'ụzọ doro anya na ugbu a ọ bụ ngwa:
"Ezubere maka ọha na eze yana maka ụlọ ọrụ, Jami na-achọ ịnye ndị ọrụ ya ihe eji arụ ọrụ nkwukọrịta zuru ụwa ọnụ, n'efu, na nchekwa, wee wulite ya na ụlọ ekesara nke na-achọghị ndị isi ma ọ bụ ndị sava etiti iji rụọ ọrụ."
Jami na otu aka nwere ike na-enwe ekele dị ka a mfe ozi ngwa, nke ahụ bụ, ngwa maka ozi ederede, oku ọdịyo na vidiyo, nyefe faịlụ, mkparịta ụka vidiyo, n'etiti ihe ndị ọzọ. Ma ihe ọ na-eme n'ezie Jami dị iche bụ teknụzụ dị n'okpuru na-akwado ya.
Na mgbakwunye na ugbu a ikwe ka ndị ọzọ free na-emeghe onyinye na mmepe nke otu, na nnabata dị irè karị nke enyemaka na aro dị mkpa, n'akụkụ nke obodo gị niile, ndị na-arụsi ọrụ ike na mmepe na mmelite nke Jami.
1.2.2 Oku vidiyo
1.2.3 Ozi ederede
1.2.4 Ozi olu na vidio
1.2.5 Nnyefe faịlụ
1.3 Otutu nyiwe
Jami lekwasịrị anya na nke a, ebe ọ bụ na nzuzo dị mkpa maka ngwa na-eji Internetntanetị. Jami na-enye gị ohere ikwurịta okwu ma na-echekwa nzuzo gị, ọ bụ site na izipu ozi, olu ma ọ bụ oku vidiyo, ma ọ bụ ịkekọrịta faịlụ.
Mee oku nzụkọ site na ọnụọgụ na - enweghị njedebe nke ndị nsonye nwere ogo ọdịyo Opus 48 kHz.
Ọ na-enye ahụmịhe dị elu na oku vidiyo nwere mkpebi dị elu (HD).
Ọ gụnyere ozi ederede echekwara ma zoro ezo, na-enweghị ihe nkesa ọ bụla dị n'elu ikpo okwu, na-eji teknụzụ netwọk ekesara. Na ohere nke ịkekọrịta ngosipụta na mmetụta uche site na iji emojis na GIF animations.
Ozi olu na vidio
Ọ na - eme ka o kwe omume izipu olu na vidiyo (vidiyo) n'otu pịa. Iji kwado ozi ogologo ma ọ bụ nkọwa ogologo nke nwere ahụmịhe ọrụ na-atọ ụtọ ma mara nke ọma.
Ọ na-ekwe ka izipu nke multimedia faịlụ (oyiyi na vidiyo) nke nkịtị formats enweghị size mmachi n'etiti ndị ọrụ ya. Ime faịlụ .gif, .jpg, jpeg, .png, .webp, .ogg, .mp3, .wav, .flac, .webm, .mp4 na .mkv faịlụ na-akpaghị aka ebudatara.
N'agbanyeghị na a Free Software Development lekwasịrị anya GNU / LinuxNa mgbakwunye na ikpo okwu a ma ọ bụ Sistemụ arụmọrụ, emepụtara ya nke ọma iji gbue ya n'okpuru sistemụ arụmọrụ ndị a:
Gam akporo (Mobile / TV)
Maka GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ ya nwere faịlị faịlụ yana ndị nwere ike ịrụ maka:
18.10 (64 ntakịrị)
18.10 (32 ntakịrị)
18.04 (64 ntakịrị)
18.04 (32 ntakịrị)
16.04 (64 ntakịrị)
16.04 (32 ntakịrị)
Na mgbakwunye gụnyere nchekwa maka ịme nrụnye aka na nkesa ndị a kpọtụrụ aha n'elu, tinyere Fedora 28 na 29. Na maka mgbasawanye na atụmatụ ya ma ọ bụ ohere nrụnye ọ bara uru ileta wiki ya na weebụsaịtị GitLab: Jami na Git.
Jami mmepe na-enye na ngwa ya, ikpo okwu na teknụzụ ohuru jikọtara ọnụ ihe magburu onwe ngwaahịa nke mmepe nke ụwa nke Free Software. Na ọ kwadoro usoro nchekwa na nzuzo nke dị mkpa maka ngwa izipu ozi Internetntanetị ugbu a.
Na na mgbakwunye na gụnyere ọrụ ndị ezipụ nke izipụ na ịnata ederede, olu, vidiyo, oku, vidiyo vidiyo na faịlụ nke ụdị dị iche iche, ọ na-eme n'okpuru nkesa na-ekesa, na-agbanwe agbanwe, nke dị ike, n'efu na ad-adighi, iji nye ndị ọrụ ya mmetụta nke nnwere onwe dị mkpa mgbe ha na-eji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Jami: Uzo ikpo okwu ohuru maka ikwuputa okwu efu na nke uwa
Daalụ maka ozi na Jami. Obi ekele.
Daalụ Karmen! Obi dị anyị ụtọ na ozi ahụ masịrị gị nakwa na ọ bara uru. Daalụ maka okwu gị.
Ihe ohuru nke Deepin 15.10 biara na KWin na ndi ozo